Balaarinta Dekedda weyn ee Bosaaso oo Dhawaan la Bilaabayo iyo Ganacsatada oo Baaq loo Diray – Radio Daljir
Juunyo 28, 2015 5:33 b 0
Axad, Juun 28, 2015 (Daljir)_Dowladda Puntland ayaa ku dhawaaqday Ammar ka dhan ah gaadiid badeedka sida shaqsiga ah loo leeyahay ee ku jira dekedda weyn ee magaalada Boosaaso.
Wasiirka Wasaaradda u qaabilsan Dekedaha C/laahi Jaamac Saalax oo saxaafadda gobolka kulan ugu qabtay maanta gudaha dekedda weyn ee Boosaaso ayaa sheegay in dhowaan ay rajo weyn ka qabaan bilaabashada howlaha dib u dhiska iyo dayactirka Dekeddan weyn.
Sidaasi awgeed waxa uu sheegay in ay ku amrayaan dhamaan gaadiid badeedka isaga xiran dekedda mudo farabadan, si dekedda sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugaga bilaabmaan howlaha dib u dhiska.
“Gaadiid badeeedka yaala dekedda waxaan codsaneynaa in nalaka qaado sida ugu dhaqsiyaha badan, hadii laga qaadan waayo cid lagu eedeynayaa ma jirto” sidaasi waxaa yiri Wasiirka Dekedaha Puntland.
Waxa uu sheegay in ay dowladu u qabatay dadka iskaleh gaadiidbadeedkaas mudo ku siman laba isbuuc, hadii ka dib 14maalmood ay fuliweydo Ammarkan ay gaadiidkaasi u jiidi doonaan badweynta,
Dhowaan ayay aheyd markii la sixiixay Heshiis lagu balaarinayo Dekedda weyn ee Boosaaso, xilli uu goob joog ahaa Madaxweynaha Dowladda Puntland, waxaana la sheegay in bisha sagaalaad ee soo socota ay bilaabi doonto shirkada dhiseysa dekedda howlaha dhismaha .